Coiling mechanism of - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: coiling mechanism of disk sewing machine (Englisch - Burmesisch)
It would also be intriguing to characterize the mechanism of actions and clarify the effective components of TCM treatments or their combinations if possible.
လုပ်ဆောင်မှုယန္တရား၏ ထူးခြားသည့် သွင်ပြင်လက္ခဏာကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် TCM ကုသမှုများ သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ပါက ၎င်းနှင့် တွဲစပ်အသုံးပြုမှုများ၏ ထိရောက်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိနိုင်ရန်သည်လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဆိုင်သော အာနိသင်လျော့ပါးစေခြင်းသည် အနုနည်းဖြင့်ကုသသော ရောဂါကာကွယ်သည့်ပဋိပစ္စည်းကုထုံးသည် SARS-CoV-2 ကို ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ရာတွင် ဆက်သွယ်ပေးနိုင်သောကြောင့် ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
Development ofaCOVID-19 vaccine or therapeutic antiviral drug begins with matchingachemical concept to the potential prophylactic mechanism of the future vaccine or antiviral activity in vivo.
vivo တွင် ဓာတုဗေဒသဘောတရားတစ်ခုကို အနာဂါတ်ကာကွယ်ဆေး သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်မှုဆောင်ရွက်ချက်၏ အလား အလာရှိသည့် ရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ပုံနည်းလမ်းနှင့် တိုက်ဆိုင်ကြည့်ခြင်းဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်သည့် ဆေးဝါးကုထုံးတစ်ခုကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
nakapunta (Tagalog>Englisch)i belong to jesus (Englisch>Arabisch)oil immersed (Englisch>Arabisch)stray cat (Englisch>Malaysisch)pag tanggol (Tagalog>Englisch)misty meaning in tagalog (Englisch>Tagalog)succendam (Latein>Cebuano)lemah lesu (Malaysisch>Chinesisch (Vereinfacht))manuela (Holländisch>Deutsch)simpulan bahasa cakar ayam (Malaysisch>Englisch)ano ang kahulugan ng hapis (Tagalog>Englisch)ich durfte ein pferd reiten (Deutsch>Englisch)metrical allegory (Tagalog>Englisch)tetapi (Malaysisch>Chinesisch (Vereinfacht))venite ad me omnes (Latein>Spanisch)gefährlichste (Deutsch>Russisch)surat rasmi bahasa inggeris (Malaysisch>Englisch)the audience (Englisch>Tagalog)duration (Englisch>Französisch)context clues (Englisch>Tagalog)kawan yang setia (Malaysisch>Englisch)suffereth (Englisch>Swahili)ljubavi (Kroatisch>Deutsch)you're not my lost (Englisch>Tagalog)segurista (Tagalog>Englisch)